San Htun's Diary: November 2017
Master of Computer Science ကျောင်းသားတွေကို Compro ကျောင်းသားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ၈ လတက် ကျောင်းစရိတ်တွေကို အကြွေးထဲ ပေါင်းထည့်သွား ၂ နှစ်ခွဲ အလုပ်လုပ်ရင်း အဝေးသင်တက် အကြွှေးဆပ် ကျောင်းပြီးတာနဲ့အကြွေးလည်းကြေ ဘွဲ့ လည်းရ။ ကျောင်းသားဖက်ကကြည့်ရင် ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့မာစတာရ ကျောင်းသားများများလာရင် ကျောင်းကလည်း တွက်ခြေကိုက်။ နာမည်ကြီးကျောင်းက ဘွဲ့ ဆိုတာတွေ ဂရုမစိုက်ဘူး ယူအက်စ်အတွေ့ အကြုံပဲ လိုချင်ရင်တော့ ကျောင်းက မဆိုးဘူး။ ကိုယ်က ကျောင်းကို လုံးဝမကြိုက်။ FPP အတန်းမှာ ကိုယ့်ရမှတ် ၇၀ ဘီထက် နည်းနေတော့ ဆက်မတက်ခိုင်းဘူး။ ယူအက်စ်မှာ နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အာဘီဆစ်က စန်းစန်း status ဘာဖြစ်သွားပြီလဲလို့မေးတယ်။ ကျောင်းသားဗီဇာ F1 ကို ဘာမှမလုပ်ဘူး ဇူလှိုင်မှာဖွင့်တဲ့အတန်းကို ၂ လ စောင့်ရမယ်တဲ့။ ဆူနမ်တို့ က ကိုယ့်ကို ကျောင်းမှာဆက်နေဖို့ပရော်ဖက်ဆာလာမန်ကို တောင်းပန်ပေမဲ့ ပရော်ဖက်ဆာက ကိုယ် ယူအက်စ်မှာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်သတဲ့။ ဆူနမ်တို့စိတ်ဆိုးလိုက်ကြတာ ပရော်ဖက်ဆာဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုပြောရသလားပေါ့။ ကိုယ့်လိုအမှတ်နည်းတဲ့ ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားကိုကျတော့ ဆက်တက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ နည်းနည်းလွန်သွားပြီလို့ ထင်တယ်။ ဆူနမ်တို့ က ပရော်ဖက်ဆာကို သွားတောင်းပန်ခိုင်းပေမဲ့ မတရားဘူး သွားမတောင်းပန်ဘူးဆိုပြီး ခေါင်းမာမာနဲ့ငြင်းခဲ့တယ်။
စာမေးပွဲရမှတ်ဆိုတာတွေက ပရော်ဖက်ဆာ လက်ထဲမှာရှိတယ်။ ကိုယ်က TM ကိုမကြိုက် ကျောင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ ။ ကျောင်းမှာဆက်နေရင် နေစားစရိတ်တွေ တက်နေမှာမို့အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းမြို့ က ရပ်ဆွေရပ်မျိုး အမျိုးလိုခင်တဲ့ အစ်မဆီမှာနေပြီး စောင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီကျောင်းကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘူးလို့ကြုံးဝါးခဲ့တယ်။ ကျောင်းလခတွေ စာရင်းရှင်းတော့ အကြွေး ၆၀၀၀ တင်နေပြီ။ ကျောင်းအပ်တုန်းက ၆၀၀၀ ပေးပြီးသားအပြင် ကျောင်းမှာ ၂ လလောက်ပဲ နေရသေးတယ် ဘယ်နှယ့်ကျောင်းစရိတ်တွေ များနေပါလိမ့်။ နောက်တကျောင်းပြောင်းဖို့ ဆိုရင် အရင်ကျောင်းက ကျောင်းအကြွေးတွေဆပ် ကျောင်းကနေ အကြွေးကင်းရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ စာရွက်ထုတ်ပေးပြီးမှ ရမယ်တဲ့။ နောက်ကျောင်းပြောင်းဖို့ ဆိုရင် ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကုန် အချိန်တွေကုန်မှာ ဒီကျောင်းကို ပြန်တက်တာက အကောင်းဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အမေနဲ့ မကြီးက ပိုက်ဆံကိစ္စ စဉ်းစားမနေနဲ့မပျော်ရင်ပြန်လာလို့ပြောပေမဲ့ ကိုယ် ကြိုးစားချင်တာ။ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားမှားမှန်း သက်သေပြချင်တာ။ လဲကျရင် ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားချင်တာ။ သူများတွေလည်း ဒီလိုပဲရုန်းကန်နေကြတာပဲ ကိုယ်က သူများထက် ညံ့နေလို့ လား။ ကိုယ် ဒီလောက် မညံ့ပါဘူး သူများထက် ပိုကြိုးစားအားထုတ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရွှေးခြယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကို အဆုံးထိ ဆက်လျှောက်ရမယ်။ အဲဒီ ၂ လ စောင့်ဆိုင်းနေချိန်ဟာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခက်ခဲဆုံး အပင်ပန်းဆုံး အချိန်တွေပါပဲ။ အသိအစ်မမှာလည်း အဆင်ပြေတာမဟုတ်တော့ ကပ်နေရတာ အားနာမိတယ်။ problem solving skills ကောင်းအောင် ပရော်ဖက်ဆာမိခဲလ်ညွှန်တဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်၊ ပရိုဂရမ်းမင်းတွေ လေ့လာ၊ ဆူနမ်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ၊ အိမ်စာတွေဖတ်။ NGO အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ဝက်ဆိုဒ်ကို Joomla လေ့လာပြီး ပြင်ပေး။ မြန်မာဘာသာပြန်ပေးရင် ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုလို့ဇော်ဂျီဖောင့်လေ့ကျင့်။ စာမေးပွဲကျ ကျောင်းကထွက်လာရလို့စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေတဲ့ကိုယ်ဟာ ဒုက္ခသည်တွေ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကိုယ့်ဒုက္ခဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ Why me လို့အဆိုးတွေ မြင်နေရာကနေ blessing တွေ မြင်လာတယ်။ ဒုက္ခသည်ဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ အခွင့်အရေးတော့ တော်တော်ရတယ်။ အသိအစ်မဆို စတိတ်ကိုလာဖို့လေယာဉ်စရိတ်၊ နေဖို့ တိုက်ခန်း ငှားထားပေးတယ်၊ စားသောက်ဖို့food stamp ပေးတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ဆပ်ရတယ်။ ဟာ ဒါဆို ဒုက္ခသည်လျှောက်ရင်ကောင်းမလား စတိတ်ကို ရောက်နေပြီဆိုတော့ ဒုက္ခသည်လျှောက်လို့ မရဘူး အဆိုင်လမ်တော့ လျှောက်လို့ ရတယ်။ ခုတော့ မလျှောက်သေးပါဘူး ကျောင်းပြီးမှလျှောက်ရင်ရော။ အဆိုင်လမ်က တစ်နှစ်အတွင်း လျှောက်ရတာတဲ့။ ကျောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ ဘေးမှာရာမားအခန်း၊ ရာမားအခန်းရှေ့ က မိုင်းဖန်အခန်း၊ ကိုယ့်အခန်းရှေ့ က ဆူနမ်အခန်း။
မိုင်းဖန်၊ စန်းထွန်း၊ ရာမား၊ ဆူနမ်
နီပါလီ Dashain ပွဲတော် အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁။
လေးကောင်းသား လောင်းကျော် ညနေဆို ဆူနမ့်အခန်းမှာ တရုန်းရုန်း စာလုပ်ကြ စားကြသောက်ကြ စကားပြောကြ။ ကိုယ်တွေ ရယ်သံနဲ့ နှိပ်စက်လို့အီဂျစ်မလေး အခန်းပြောင်းပြေးရတယ်။ FPP အတန်းမှာ ပရော်ဖက်ဆာလာမန်နဲ့ပြန်တွေ့ တယ်။ စာမေးပွဲမှာ A+ ရတော့ ပရော်ဖက်ဆာက ဘယ်လိုလေး ဖြေသွားတာ သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ချီးကျူးတယ်။ ကိုယ့်တသက်မှာ အမှတ်တရအရှိဆုံးစားမေးပွဲ ဘယ်နှယ့်ရှိစလို့မျက်ခုံးချီပြီး ပြုံးနေတော့တာ။ ပရက်ဖက်ဆာလာမန်ရဲ့လေးစားတဲ့အကြည့်တွေကုိုမြင်တိုင်း ငါကွလို့လက်တီးလက်မောင်း တန်းချင်နေတော့တာ။ FPP ၊ MPP အတန်းတွေမှာ ဘီရမှ ဆက်တက်ခွင့်ရှိတယ် ဘီမရရင် နောက်တတန်းစောင့်။ 500 level course တွေဖြစ်တဲ့ Advanced Software Developement (ASD) ၊ Web Programing Developement (WAP) ၂ ခု ၊ Algorithms ဘာသာရပ်တွေကို မဖြစ်မနေယူရတယ်။ ASD ကို ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဂတ်သရီသင်တာ အောင်ချက်နည်းတယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျတယ်။ တနှစ်လုံးစာအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထွက်တော့ ဘယ်လမှာ ဘယ်ဘာသာရပ်ကို prority ဘယ်လောက်သုံးပြီးယူလို့မိုင်းက လမ်းညွှန်ပေးတယ်။ အရမ်းတက်ချင်တဲ့ဘာသာ၊ တက်မဲ့သူများတဲ့ဘာသာဆို priority5အမြင့်ဆုံးယူပြီး လျှောက်ရတယ်။ Algorithms မှာ B- ရပေမဲ့ ပရော်ဖက်ဆာက algorithms ထပ်ယူစရာမလိုဘူးဆိုပြီး အောင်ပေးလိုက်တယ်။ မိုင်းက ASD ဘာသာရပ်ကို အဝေးသင်ကျမှ ယူခိုင်းတယ်။ ဆူနမ်တို့ ကားကို တရုတ်မလေးယန်ဇီနဲ့စပ်တူဝယ်တယ် ၆၀၀ ပေးရတယ်။
ညနေတိုင်း ဆူနမ်က ကားမောင်းသင်ပေးတယ်။ ကိုယ် ပင်ပန်းလို့ အိပ်နေရင်တောင် ဆူနမ်က လာနိုးပြီး ကားမောင်းကျင့်ပေးတယ်။ lane change ၊ parallel parking လို ခက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် ဂင်္ဂါ လာသင်ပေးတယ်။ တညနေ ကားမောင်းကျင့်ဖို့စက်နိုးတော့ မနိုးဘူး။ မိုင်းဖန်ကိုခေါ် ကားဘေးမှာ လေးကောင်းသား ကားအဖုံးကိုဖွင့် ဟိုဟာနှိပ်ကြည့် အင်ဂျင်ဝိုင်၊ ရေတွေစစ်ကြည့် ခေါင်းကုတ်လက်မှိုင်ချ။ ဂင်္ဂါလာကြည့်ပေးတော့မှ ဘတ်ထရီအားမရှိတာတဲ့။ ယန်ဇီ မနေ့ ညက ကားမောင်းလေ့ကျင့်ပြီး မီးပိတ်ဖို့ မေ့သွားလို့ဘတ်ထရီအားကုန်သွားတာ။ သူ့ တရုတ်ဘော်ဒါတွေ ရောက်လာပြီး ကားစက်နိုး ဘတ်ထရီသွင်းတယ်။ စတိုင်ပင်လခရရင် pizza ranch ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာ သွားစားကြတယ်။ ဝေသာလီပြည် ဘီလူးစီးသလို စားကြတာ ကျောင်းမှာငတ်တာကိုး။ ကြက်ပေါင် ၆၊ ၇ ခု အသာလေးပဲ။ တရုတ်ဘူဖေး၊ အိန္ဒိယဘူဖေး ၂ဘူးဝယ် ထမင်းတအိုးတည်ပြီး စားကြတယ်။ ဘိုင်ကျတဲ့အခါ မက်ဒေါနယ်က mac chicken စားကြတယ်။ လေဘာဒေးပိတ်ရက်တုန်းက ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာနေတဲ့ ရာမားဆီ သွားလည်တော့ ဆူနမ်နဲ့ကျောင်းတုန်းကအကြောင်းတွေ ပြောနေကြသေးတယ်။ pizza ranch ဆိုင် ပိတ်သွားပြီတဲ့ ကိုယ်တို့ ကျောင်းကလူတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်။ ၈ ကျပ်ပေးပြိး ၃၀ ဖိုးလောက် စားကြတာကိုး ဈေးတက်လို့ လည်းမဖြစ် ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို သနားလိုက်တာ။
ဆူနမ်တို့ ကျောင်းက ထွက်ခါနီး ညတိုင်းနီးပါး နှုတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပတယ်။ ကိုယ့်ကိုဖဲရိုက်သင်ပေးပြီး ဖဲရိုက်တယ်။ အဆောင်မှုး RA က နှုတ်ဆက်ပွဲတွေ လုပ်နေမှန်းသိတော့ အသံသိပ်မကျယ်ဖို့သတိပေးရုံးလောက်ပဲ။ တခါတလေ ဘီယာ၊ ဝိုင် သောက်ကြတယ်။ အဆောင်တွင်း ဘီယာ၊ ဝိုင် သောက်ခွင့်မရှိ ထမင်းချက်ခွင့်မရှိ။ ကိုယ်တို့ က ပေါင်းအိုးနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ချက်ကြတယ် ပြီးရင် အမွှေးတွေဖြန်း။ မီးဖိုချောင်ရှိပေမဲ့ သတ်သတ်လွှတ်ပဲ ချက်ခွင့်ရှိတယ် တရုတ်မတွေက ချက်ပြီးရင် မရှင်းလင်း နည်းနည်းဝေးတော့ သိပ်မချက်ဖြစ်ဘူး။ ယောကျာ်းလေးအဆောင်ကြတော့ ဆေးလိပ်ခိုးသောက်ကြလို့fire alarm မြည်တာ ရိုးနေပြီတဲ့။ မိုင်းဖန်က အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမှာ အလုပ်ရတယ်။ ဆူနမ်နဲ့ ရာမားက မေရီလန်းပြည်နယ် ဘာတီမိုးမှာနေတဲ့ ဆူနမ်နဲ့ အဆောင်အတူတူ၊ တက္ကသိုလ်အတူတူ၊ အလုပ်ဝင်တော့လည်း ကုမ္ဗဏီအတူတူ၊ နီပေါတက္ကသိုလ်မှာလည်း စီနီယာ ယူအက်စ်ကျောင်းမှာလည်း စီနီယာ ညီအစ်မလိုချစ်ကြတဲ့ အက်စမီတာမန်ချေးဆီမှာ သွားနေပြီး အလုပ်ရှာကြမှာ။ ဆူနမ်တို့ထွက်ခွာသွားတော့ အတော်ဝမ်းနည်းတာ။ ဖေဖေါ်ဝါရီအသုတ် ကျောင်းသား ၅၀ ကျော်မှာ မိန်းကလေးက ၅ ယောက်၊ ကိုယ်၊ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းဖန်တို့ က ညီအစ်မလိုခင်တယ်။ အီသီယိုးပီးယားကနေ ခွှဲထွက်တဲ့ အက်စတီရာနိုင်ငံကနေ ဒီဗွီပေါက်လို့စတိတ်ရောက်လာတဲ့ အာရီယန်နဲ့က မခင်ဘူး။ ဇူလှိုင်အသုတ်ကျတော့ ကျောင်းသား ၄၀ ကျော်မှာ မိန်းကလေးဆိုလို့တရုတ်မလေးယန်းဇီပါတယ်။
ယန်ဇီဟာ တဦးတည်းသောသမီး ငယ်ငယ်ကတည်းက စန္ဒရားတီးသင်ခဲ့တာဆိုတော့ စန္ဒရားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် တီးတတ်တယ်။ သူဋ္ဌေးသမီးဆိုတော့ သူ့ အဖေရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုင်ပြီး ဝယ်ချင်တာဝယ် စားချင်တာစား။ တရုတ်ဘော်ဒါတွေလည်းများတော့ နေ့ တိုင်းလိုလို အပြင်ထွက်စားတယ်။ ဒီဇင်ဘာမှာ ကျောင်း ၁၀ ရက် ပိတ်တော့ တခြားကျောင်းသားတွေက လျှောက်လည်ကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ လည်စရာပိုက်ဆံမရှိ ဆူနမ်တို့ ကလည်း သူများအိမ်မှာ ကပ်နေရတာမို့မခေါ်နိုင်။ ဒီလိုနဲ့ပင်ပန်းအထီးကျန်တဲ့ နေ့ ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းလို့စာမေးပွဲတွေအောင်၊ ကားမောင်းလိုင်စင်ရအောင် ကြိုးစားရတယ်။ ဇန်နဝါရီမှာ အလုပ်ရှာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သင်တန်းပေးတယ်။ ဖုန်းအင်တာဗျုးမှာ ပထမဆုံးမေးမဲ့မေးခွန်းက legal status က ဘာလဲ။ ကျောင်းသားဗီဇာလို့ ဖြေရင် တခါတည်းဖုန်းချသွားရော။ work authorization ရှိပါတယ် ကျောင်းသားဗီဇာ ၂ နှစ်ခွဲ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ အစိုးရကို ဘာစာရွက်စာတမ်းမှ တင်စရာမလိုဘူး အလုပ်ရရင် ကျောင်းကနေ I 20 form ရဲ့ နောက်ဆုံးတတိယစာမျက်နှာမှာ ဘယ်ကုမ္ဗဏီ၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘာရာထူး၊ ဘယ်နေ့ ကနေ ဘယ်နေ့ အထိဆိုတာ ထုတ်ပေးလိုက်ရင် အလုပ်လုပ်လို့ ရပြီ။ တချို့ ကုမ္ဗဏီတွေက ကျောင်းမှာအင်တာလာဗျူးတယ်။ ရေးဖြေ၊ လူတွေ့ အင်တာဗျူးဖြေပြီး ပထမဆုံးအင်တာဗျူးနဲ့ယန်ဇီက အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ်မှာ အလုပ်ရသွားတယ်။ ကိုယ့်ဘော်ဒါ တရုတ်ကလေး ပေါင်လည်း ယန်ဇီနဲ့ကုမ္ဗဏီတခုတည်းမှာ အလုပ်ရတယ်။ အင်တန်းရှစ်အလုပ်ကို ကိုယ်ဘယ်လိုရှာဖွေရခဲ့ရသလဲတွေကို နောက်အပိုင်းမှ တင်ပါဦးမယ်။
နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇။
ကိုယ်လာတဲ့ ၂၀၀၈ ကျမှပဲ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းလခတွေ ဈေးတက်သွားတာ မာစတာက ၆ ထောင်၊ ကိုယ်တက်တဲ့ ဘွဲ့ လွန်ဒီပလိုမာက ၁၆၀၀၀ လား ၁၈၀၀၀ လား မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘဏ်က ကျောင်းသားအကြွေး ၆၀၀၀ ချေးတယ်။ ကျောင်းပြီးရင် ပြန်ဆပ်ရတယ် အတိုးနှုန်းက အင်မတန်သက်သာတယ်။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ တယောက်ကိုတယောက် လက်မှတ်ထိုးပြီး ဘဏ်ကချေးတယ်။ ကံကောင်းတာက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ကျောင်းပြီးအလုပ်ရလို့အကြွေးတွေ အကုန်ဆပ်နိုင်ကြတာပဲ။ ကျောင်းမပြီး အကြွေးမဆပ်နိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို လက်မှတ်ထိုးပေးမိလို့ကျောင်းအကြွေးတွေ စိုက်ဆပ်ရတဲ့သတင်းတွေကို ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အစိုးရက ၆၀၀၀ ချေးတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ စင်္ကာပူကုမ္ဗဏီမှာ ၃ နှစ်အလုပ်လုပ်ရင် ပြန်ဆပ်စရာမလုို။ Service Obligation ထိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၆၀၀၀ ရမယ်ဆိုတော့ လက်မှတ်ထိုးကြတာပေါ့။ တရုတ်ကျောင်းသားတချို့ Service Obligation မထိုးဘူးလို့ ကြားတယ်။ ကျန်တာအဖေစိုက်၊ စင်္ကာပူမှာ နေစရိတ်၊ စားစရိတ် မကြီးက ထောက်ပံ့ပေး ခြိုးခြံချွှေတာရတဲ့ ကျောင်းသူဘဝ။ NUS မှာ ကျောင်းတက်ရတာ ပင်ပန်းပေမဲ့ ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စာမေးပွဲက open book ကြိုက်တဲ့စာအုပ် ကြိုက်သလောက် သယ်လာလို့ ရတယ်။ အဲ့ဒါက closed book ထက် ပိုခက်တယ်လို့ထင်တာပဲ။
ကိုယ်ဟာ စာတော်တဲ့ကျောင်းသား မဟုတ်သလို စာကြိုးစားတဲ့ ကျောင်းသားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာရပ်တိုင်းကို အောင်မှတ်နဲ့ ကပ်အောင်ရုံတင်လေး ကပ်အောင်တာ။ ကျောင်းမှာ ပရောဂျက်တွေ လုပ်တုန်းကတော့ အော်ဟစ်ငြင်းခုန် ရန်ဖြစ်ကြပေမဲ့ အလုပ်ရှာတဲ့အခါ ကျောင်းသားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီသလို စီနီယာတွေကလည်း ကူညီပေးတယ်။ စင်္ကာပူရုံးကအလုပ်က ရေးဖြေးစာမေးပွဲဖြေ ပရောဂျက်သေးလေး ရေးခိုင်းတယ်။ ကိုကြီးကျော်က ဒီဇိုင်းကူညီပေး ဘလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သင်္ဂီဘကို အကူအညီတောင်း ပရိုဂရမ်ကူရေးခိုင်း၊ လူတွေ့ စာမေးပွဲဖြေ။ ကိုယ့်ကျောင်းနေဖက်ကောင်လေးကို အော်ဖာအရင်ကမ်းတာ သူက တခြားအော်ဖာလက်ခံပြီးပြီမို့ကိုယ့်ကို အော်ဖာကမ်းလာခဲ့တယ်။ ကိုကြီးကျော်၊ ဘ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အလုပ်ရခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်က ပရိုဂရမ်းမင်း မကျွှမ်းသေးတော့ စူပါဗိုက်ဆာက သိပ်သဘောမကျဘူး။ တစ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့အလုပ်ပြောင်းဖို့အလုပ်တွေလျှောက်ရင်း စတိတ်ကျောင်းကို မထင်မှတ်ဘဲ လျှောက်မိလို့စတိတ်ကို သွားရဖို့ ဖန်လာပြန်ရော။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ရန်ကုန်ကိုပြန် သူငယ်ချင်းတွေကို နှုတ်ဆက်တယ်။ အဖေက ကိုယ် စတိတ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ မသွားစေချင်ဘူး။ မင်း...သမီး အဝေးကြီးကို သွားဖို့ လုပ်နေပြန်ပြီ မသွားအောင်ပြောဦးလို့အဖေက အမေ့ကို ပြောပေမဲ့ အမေက စတိတ်ကိုမသွားဖို့နားမချတဲ့အပြင် မြင့်မြင့် ပျံနိုင်သမျှ ပျံလိုက်စမ်းသမီးတဲ့။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေအကြောင်း ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ ရေဒီယိုမှာ နားထောင်ရတိုင်း အမေက သူ့ သားသမီးတွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာတော်သင် ဖြစ်စေချင်တာတဲ့။ သူတို့ ပညာမတတ်လို့သားသမီးတွေကို ပညာအမွေပေးမယ်ဆိုပြီး ပညာရေးကို အလေးထားတဲ့ မိဘမျိုးကိုရထားတာ တကယ်ကံကောင်းတာပဲ။ စတိတ်မှာ တက္ကသိုလ်တွေက အများကြီး။ ဟားဗတ်၊ အမ်အိုင်တီ၊ ယေးလ်၊ ပရင်စတန် Invy League တက္ကသိုလ်တွေက ဝင်ခွင့်ခက်သလို ကျောင်းလခလည်း ဈေးများတယ်။ ယေးလ်တက္ကသိုလ်သွားလည်တုန်းက ယေးလ်တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ တိုးဂိုက်မလေးပြောတာ ကျောင်းလခက တနှစ် ၆ သောင်းတဲ့။ ရိုက်စားကျောင်းတွေလည်း ရှိတယ် တချို့ ကျောင်းတွေဆို ပိတ်လိုက်လို့ကျောင်းသားတွေခမျာ ပိုက်ဆံလည်းဆုံး၊ ဘွဲ့ လည်းမရ ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာ။ စတိတ်ကိုမလာခင် အဲဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသူကိုမေးကြည့်တယ်။ သူက ကိုယ်တို့ ကွန်ပျူတာကျောင်းထွက် ဂျူနီယာ အဆင်ပြေမှာပါ အစ်မရဲ့လာခဲ့ပါတဲ့။ စတိတ်ကိုလာဖို့ပိုက်ဆံစု ရုံးကိုတလနို့ တစ်ပေး စတိတ်ကိုမလာခင် ၂ ရက်အလိုမှာ ရုံးက farewell လုပ်ပေးတယ်။ ၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉ စင်္ကာပူကနေ စတိတ်ကိုလာတဲ့ခရီးကတော့ တသက်မမေ့နိုင်တဲ့ခရီးပဲ။ ဖေဖေါ်ဝါရီဆိုတော့ သစ်ပင်တွေက အရွှက်မရှိ ရိုးတံကျဲကျဲ မည်းခြောက်ခြောက်နဲ့ရုပ်ဆိုးလိုက်တာ။
Fall foliage hiking at Bear Mountain State Park, New York
ရာသီဥတုကအေး သူငယ်ချင်းမရှိတော့ အတော်ဝမ်းနည်းတာ။ အာဂျီရိုဆောင်က အစားအသောက်တွေကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးရွားဆုံး အစားအသောက်တွေ။ ချိုလွန်းငန်လွန်းတဲ့ အမေရိကန်စာ၊ အာဂျီရိုဆောင်က အစားအသောက်တွေကို မစားနိုင်လို့တသက်လုံး ဘယ်တော့မှ မပိန်တဲ့ကိုယ် လေးပေါင်ကျတယ်။ နေရာဒေသသစ်မှာ ရာသီဥတုသစ်၊ လူအသစ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်နဲ့နေသားကျဖုို့အတော်ကြိုးစားရတယ်။ ရောက်ပြီးတပတ်အကြာ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေရတယ်။ ရမှတ်တွေ မူတည်ပြီး အတန်းတွေ ခွဲတယ်။ အမှတ်နည်းတဲ့သူက FPP အမှတ်များတဲ့သူက MPP တက်ရတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ပါကစ္စတန်ကောင်လေးက ဘီ ၇၀ မှတ်ထက် နည်းလို့နောက်ထပ်စာမေးပွဲ ထပ်ဖြေရတယ်။ ဆူနမ်နဲ့ ရာမားက လေ့ကျင့်ဖို့မေးခွန်းတွေ လာပေးတယ်။ ဆူနမ်တို့ မှာ homework ၊ practice တွေ အကုန်ရှိတယ်။ အဲဒီစာမေးပွဲက အိမ်ပြန်ခရီးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့ စာမေးပွဲဆိုတော့ တညလုံးအိပ်မပျော်ဘဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အမှတ်က ၇၀ ထက် နည်းပေမဲ့ ပရော်ဖက်ဆာက FPP တက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ပါကစ္စတန်ကောင်လေးကတော့ ပြန်သွားရတယ်။ စတိတ်ကျောင်းက ပရိုက်ဗိုက်ကျောင်းပေမဲ့ အမြတ်အစွန်းမယူတဲ့ non profit ကျောင်း။ ကျောင်းတည်ထောင်သူ အိန္ဒိယယောဂီ မဟာရီချီရဲ့Transcental Meditation နဲ့ သင်တဲ့ကျောင်း။ TM ဆိုတာ တရားမှတ်နည်းတမျိုးပါပဲ။ The Beatles အဖွဲ့ ဝင်တယောက်၊ အော်ဖရာဝင်းရေး တရားလာထိုင်လို့TM ကို လူသိများတယ် ဆိုပါတော့။
မလေးရှားက HP မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဗီယက်နမ်မလေး မိုင်းဖန်က TM ကို မလေးရင်းဂစ် ၁၀၀ ပေးပြီး တက်လာတယ်။ ဆူနမ်တို့ လည်း နီပေါမှာ တက်လာတယ်။ စတိတ်မှာတက်ရင် ၈၀၀ ကျော် ပေးရတယ် ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာ နင်မသိဘူးလား အေး ငါမသိဘူး။ ကျောင်းက သက်သက်လွတ်ကျွှေးတယ်ဆိုတာကော သိလား အဲဒါတော့သိတယ်။ နေ့ လည်စာမစားခင် ၁၅ မိနစ် တရားထုိုင်ရတယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းသားတွေကတော့ Close your eyes. Do u feel the quietness ? လို့နောက်ကြတယ်။ တရားထိုင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားရင် မနှောင့်ယှက်နဲ့sign of good meditation တဲ့။ ကုလားဆို အမြင်ကပ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတယောက်က ခေါင်းမြီးခြုံကုလားမ။ စတိတ်မှာ လာတက်တာက ကုလားကျောင်း၊ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေက ကုလားမ နီပေါမလေးတွေ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ခေါင်းမြီးခြုံမလေးက မလေးရှားမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ ကိုယ် စင်္ကာပူမသွားခင်အထိတော့ မလေးရှားမှာ ဆရာမဖြစ်နေတယ် ကြားတယ်။ သူ ရန်ကုန်အလည်ပြန်ရောက်တယ်ကြားလို့ဖုန်းဆက်သေးတယ် ဒင်းကို ဘယ်လိုမှ ဖမ်းလို့ မမိဘူး။ တခါတလေ ခေါင်းမြီးခြုံမလေးတွေတွေ့ ရင် ဟေ့ကောင် မင်းလို့ပြောတတ်၊ အားရပါးရရယ်တတ်၊ အရင်တုန်းက ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့၊ ကိုယ့်ပခုံးကို မနာအောင် လက်သီးနဲ့ဖွဖွလေး ထိုးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို သတိရတယ်။ သူနဲ့ ကိုယ် တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံမရှိပေမဲ့ သူ့ မျက်နှာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်နေတုန်းပဲ။ ကိုယ်တို့ မတွေ့ တာ ၁၅ နှစ်ကျော်ပြီ။
၂၀၁၁ စတိတ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းလခ ၆၀၀၀ သွင်းရတယ်။ အဆောင်ခ၊ စားစရိတ်၊ ကျောင်းလခတွေကို အကြွေးထဲ ပေါင်းထည့်သွားပြီး ၈ လပြီးလို့အင်တန်းရှစ်ဆင်း အလုပ်ရတဲ့အခါ ပြန်ဆပ်ရတယ်။ ကျောင်းကြွေးယူတဲ့အခါ ဂရင်းကဒ် ဒါမှမဟုတ် စီတီဇင် ၂ ယောက် လက်မှတ်ထိုးဖို့ လိုပေမဲ့ ကျောင်းကအားလုံးလုပ်ပေးတယ်။ ဂျီစီ၊ စီတီဇင်တွေက ၁ သောင်းပဲ ပေးရပြီ ၁ နှစ်တက် အင်တန်းရှစ် ၂ နှစ်ခွဲ ဆင်းရတယ်။ အဆောင်မှာနေရင် ပိုက်ဆံမပေးရ ကျောင်းကြွေးထဲ ထည့်သွားတာဆိုတော့ ဈေးကြီးပေမဲ့ ချက်ချင်းပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတော့ အဆောင်မှာနေတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေကတော့ mobile park ကား ကားအိမ်လေးတွေမှာ ငှားနေကြတယ်။ အဆောင်မှာ ချက်ပြုတ်စားခွင့်မရှိတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး အဲဒီအိမ်မှာ မီးဖိုချောင်သုံးခ ပိုက်ဆံနည်းနည်း ပေးပြီးတော့ ချက်ပြုတ်စားကြတယ်။ အစားအသောက် မကောင်းဘူး၊ ထိုင်ခုံက ထိုင်လို့ မကောင်းဘူးနဲ့ဘာမဆို ကွန်ပလိမ်းလွန်းတဲ့ကိုယ့်ကို ကွန်ပလိမ်းဂဲလ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ စန်းစန်းဟာ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ကွန်ပလိမ်းရတာလဲလို့အဖြေရှာကြတော့ မလေးရှားမှာနေဖူးတဲ့ ဗီယက်နမ်မလေးမိုင်းဖန်က စင်္ကာပူမှာနေလို့ ဖြစ်မယ် စင်္ကာပူရန်းတွေ သိပ်ကွန်ပလိမ်းတာ။ ကျောင်းမှာဘယ်လို ရုန်းကန်ခဲ့ရလဲ၊ အလုပ်ဘယ်လို ရှာခဲ့ရလဲ ဆိုတာတွကိုတော့ နောက်အပိုင်းကျမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇။